Ahoana ny famerenanao ny teny miafin'ny root rehefa manadino azy ianao | Avy amin'ny Linux
Ahoana no hamerenanao ny teny miafina root rehefa manadino azy ianao
Ao amin'ny Linux sy tontolo iainana Unix hafa ananantsika tenimiafin'ny mpampiasa ary koa ny an'ny kaonty faka. Rehefa manadino ny tenimiafin'ny mpampiasa iray isika dia tsy misy olana lehibe satria amin'ny kaonty faka na amin'ny fampiasana sudo dia afaka mampiasa fitaovana fitantanan-draharaha sasany hamerenana ny tenimiafinay mpampiasa very na hanova azy fotsiny ho lasa iray vaovao. Etsy ankilany, rehefa mitranga amintsika izany amin'ny kaonty faka, ilay mahery indrindra, dia somary sarotra kokoa ny raharaha, saingy tsy faran'ny izao tontolo izao koa ...
Ao amin'ny est totorial tsotra izahay dia hampianatra anao ny fomba fanarenana na famerenana ny teny miafina root raha nanadino ianao ary tsy afaka miditra amin'ny kaontinao manana tombony amin'ny Linux. Ny fomba hotantaraiko dia mahazatra amin'ny fizarana rehetra, na dia mety miovaova kely aza izany miankina amin'ny fampiasana bootloader hafa, sns., Fa raha mampiasa distro fantatra amin'ny GRUB ianao dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto :
Atsaharo ny solosainao na kitiho raha tsy eo izy, fa mitandrema hatrany ny efijery GRUB, satria tsy maintsy manao fandidiana vitsivitsy amin'izy ireo ianao. Noho izany, raha manomboka miditra amin'ny fidirana default ny countdown dia afindra ny mpifantina mba hijanona ny isa ary hanome fotoana anao. Raha sanatria tsy miseho ny efijery GRUB satria tsy manam-potoana ianao dia mila manova ny fikirakirana GRUB ianao mba hiseho, raha tsy fantatrao ny fomba hamelana hevitra ary hiezaka aho hanazava azy aminao ...
Raha vao tafiditra ao amin'ny GRUB isika, tsindrio ny bokotra E hanova safidy vitsivitsy.
Mitadiava tsipika aiza no misy ny anaran'ilay kernel binary image izay fenoina ary ny andalana dia miafara amin'ny "init = / bin / bash". Raha mijery an'ity tsipika ity ianao dia ho hitanao fa misy masontsivana vakiana fotsiny (ro) izay tsy maintsy ovainao mba hamakiana-tsoratra, izany hoe, rw.
Ankehitriny manindry F10 hamonjy fanovana sy hamerenana ny solosaina ary izay ho azontsika izao dia a bash shell haingana.
Tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo fitaovana ananantsika ato amin'ity akorandriaka ity ianao izao ovay ny teny miafina root:
Amin'ireto baiko telo ireto dia haverina indray izy raha vantany vao nanova ny teny miafintsika isika ary afaka miditra amin'ny distro toy ny fanaontsika mahazatra ...
Hay fomba hafa hanoloana an'io fomba io, toy ny fampiasana LiveCD, na koa ny fakana tahaka ny tenimiafin'ny teny miafina fantatra eny an-tsaha mifandraika amin'ny kaonty faka / sns / aloka, saingy tsy manoro hevitra an'ity farany aho, satria raha adinonao ny manova azy raha vao mahazo fidirana ianao, tsy ho voaro izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana no hamerenanao ny teny miafina root rehefa manadino azy ianao
Carlos Saldaña dia hoy izy:
"Miaraka amin'ny fahefana lehibe dia misy andraikitra lehibe" - Dadatoa Ben
Mamaly an'i carlos saldaña
arcane dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara Isaka. Misaotra anao.
Valiny amin'i Arcane
Izao ho an'ny lahatsoratra iray momba ny fomba hiarovan-tenimiafina grub.
Misaotra noho ilay lahatsoratra, miombon-kevitra amin'i David aho, tonga izao ny fotoana hiarovana ny grub mba hialana amin'izany, satria avy eo mety "olona" manakorontana izany.
Ary avy eo ny lahatsoratra iray momba ny fomba hamerenanao ny teny miafinao GRUB rehefa manadino azy ianao.
Linux Mint 19.1 Tessa dia nanambara, ny volana novambra na desambra 2018
Hafahafa ny fiainana: Alohan'ny hahatongavan'ny rivodoza amin'ny Linux amin'ny 13 septambra